उच्च समझका साथ अग्रगामी निकास निकाल : RajdhaniDaily.com -
Home बिचार उच्च समझका साथ अग्रगामी निकास निकाल
सत्तारूढ दल नेकपामा पछिल्लो चरणमा चलिरहेको विवादले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । पार्टीका अध्यक्षद्वयले राजनीतिक निकास निकाल्नुको सट्टा एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप लगाई जवाफ र प्रतिजवाफको नाममा झगडा र किचंगलमा रुमल्न थालेपछि स्थिति भयावह हुन्छ कि भन्ने देखिन थालेको छ । धेरैको अनुमानमा यो केही समयमै मथ्थर हुने देखिए पनि अनुमान गरेअनुसार त्यो अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक रूपमा उठेका राजनीतिक समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि कूटनीतिकभन्दा पनि राजनीतिक समझदारीका बाटो लिनु जरुरी हुन्छ । राजनीतिक समस्यालाई कुटिल र कूटनीतिक व्यवहारद्वारा हल गर्न सम्भव हँुदैन । फेरि, अन्तरदेशीय मामिलामा उठेका समस्याहरूको हल गर्ने उपाय कूटनीतिक विचार हो भने त्यसभित्रको र पार्टीभित्रको आन्तरिक मामलामा उठेका विषयहरू हल गर्न राजनीतिक उपाय अपनाउनपुर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू दलभित्रको समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक प्रयासहरू अवलम्बन गर्न जानाले समस्या वास्तविक रूपमा हल हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने र गर्दै आएको कमजोरी के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा राजनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुने तर राष्ट्रिय मामलामा कूटनीतिक चातुर्य प्रयोग गर्न खोजी एकले अर्कालाई थकाउने, थर्काउने, फकाउने र छक्काउनेजस्ता तौरतरिका प्रयोग गर्न खोज्नाले समस्या झन् जटिल बन्न पुगेका छन् । पार्टी भित्रका एक गुटले अर्को गुटलाई, एक नेताले अर्को नेतालाई र एक पक्षले अर्को पक्षलाई कूटनीतिक छलछाम गरी आफ्नो श्रेष्ठता देखाउने प्रवृत्तिले राजनीतिक समस्या हल हुन पाएका छैनन् । तर, नेताहरूले भने त्यसैमा आफ्नो क्षमता देख्ने आफ्नो श्रेष्ठता हासिल भएको महसुस गर्ने र ‘देखाइदिएँ त’ भन्ने ईष्र्या पालेर व्यवहार गर्नाले पनि समस्या जटिल भएका हुन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले देशभित्रका समस्यालाई राजनीतिक रूपमा हल गर्ने र देश बाहिरका समस्याहरूलाई कूटनीतिक रूपमा हल गर्ने स्पष्ट मान्यता विकास गर्नुपर्छ ।
नेकपा आफंैमा सत्ताधारी दल हो । त्यसको जिम्मामा दुई प्रमुख दायित्व एकसाथ आइपरेका छन् । पहिलो त यसले २०१५ साल पछि अर्को दुई तिहाइ बहुमतको एकलौटी सरकार चलाउन पाएको छ । यो इतिहासमा दुर्लभ घटना हो । दुई तिहाइ बहुमत भनेको कुनै पार्टी सरकारमा बस्ने कुरा मात्र होइन, यसले जनाताको अपेक्षालाई पनि पूरा गर्न सक्नुपर्दछ । नेपाली जनता आफ्ना समस्याहरू यसैबेला समाधान होऊन् भन्ने आशामा छन् । त्यसमा पनि कम्युनिस्टको सरकार भनेपछि अलि बढी आशा नै गरेका छन् । तर एउटा पार्टीको एकलौटी सरकार चलेको लगभग तीन वर्ष पुग्न थालिसक्यो । यसबीचमा सामान्य रूपमा र विकासको सापेक्षतामा हुनु र गरिनुपर्ने कामहरू यो सरकारबाट हुन ढिलाइ भइरहेको छ । यसबीच, जनताका अपेक्षाहरू पूरा भएनन् भने यो सरकारप्रतिको जनताको अपेक्षा र आशामाथि तषारापात हुनेछ । सरकारमा रहनेहरूले जनताको आशाअनुसार काम गर्न नसक्ने र सरकारभन्दा बाहिर रहेका आफ्नै दलबाट हरपल सरकारलाई असहयोग र बदनाम गराउने खेलहरू भए । यस्ता सबै खाले खेलहरू बन्द गरिनुपर्छ ।
अर्कोतिर, नेकपा भनेको आफंैमा सत्ताधारी पार्टी हो । यो पार्टीसँग जोडिएका कार्यकर्ता, जनता र शुभेच्छुक पार्टी र सरकार दुवैका कामदेखि सन्तुष्ट छैनन् । यसलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । भोलिका दिनमा जनता, कार्यकर्ता, समर्थक तथा शुभचिन्तकहरूले यसको औचित्यतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउनेछन् । अहिले केही काम गर्न नसके आउँदा दिनमा यो पार्टीप्रति जनताको आशा, भरोसा र विश्वास रहने देखिन्न । त्यसैले पार्टी यो बेलामा पार्टीकै मामला र सरकारको विषयलाई लिएर गम्भीर हुनु जरुरी छ । यस परिप्रेक्षमा सिंगो पार्टी र मूलतः अध्यक्षद्वय पार्टी एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढ्न अति आवश्यक हुन गएको छ । यसलाई मध्यनजर गरी ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नका लागि अग्रगामी निकास निकाल्दै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
सीपी लोहिया - August 29, 2020
जलवायु परिवर्तन : कस्ता छन् समस्या ? के भइरहेछ समाधानका लागि ?
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - December 30, 2020
पोखरा । नेपाल साहित्य महोत्सवको नवौं संस्करणअन्तर्गत दोस्रो दिन ‘जलवायु परिवर्तन र भविष्य’ शीर्षकमा छलफलसँगै सुरु भयो । कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, नेपालमा ती परिवर्तनले...
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोमबार थप ११४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पताल र डडेल्धुरा अस्पतालमा भएको परीक्षणमा ११४ जनामा संक्रमण...
मकवानपुरबाट ६ किलो सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ
प्रदेश ३ राजधानी संवाददाता - March 3, 2020
हेटौंडा । मकवानपुरमा ६ किलो भन्दा बढी सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस राजनीतिक पुस्तान्तरण आजको आवश्यकता
मंगलबार हेटौंडा–१५ स्थित रातोमाटेमा काठमाडौंबाट वीरगञ्ज जाँदै गरेको बस चेकजाँच गर्ने...
बिचार डा. विनोद दंगाल - April 18, 2020
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रारम्भिक संक्रमण मध्य चीनको वुहान सहरमा २०१९ को डिसेम्बरमा भएको थियो । कोरोनाको संक्रमण विश्वभर फैलिन...
Exclusive दिल तामाङ - July 30, 2020